ခွထေောကျထုံကဉျြ၊ ဆံပငျတှကြှေတျ၊ မကျြမှနျတှတေပျနရေလို့ စိတျညဈနသေူမြား အခြိနျမှနျ ဆားနငျး – Shwe Myanmar
ခြေထောက်ထုံကျဉ်၊ ဆံပင်တွေကျွတ်၊ မျက်မှန်တွေတပ်နေရလို့ စိတ်ညစ်နေသူများ အချိန်မှန် ဆားနင်း
ရှယ်ပြီးသိမ်းထားသင့်တဲ့ဆေးနည်းလေးပါ။ ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ်
ယနေ့ည လက်တွေ့စမ်းကြည့်တာ ဆား (၅၀ )သားလောက် ရေနွေးနဲ့ခြေထောက်ကို နာရီဝက်လောက်စိမ်ထားပြီး ခြေဖဝါးကို ဆားနဲ့ပွတ်တာ ပြီးတော့ပြောင်အောင်သဘက်နှင့်သုတ်လိုက်တယ် ဒူးအောက်ကနေ ရေနွေးလေးနဲ့ လောင်းပြီးဆေးလည်းရပါတယ် ကိုယ်မှာချွေးများထွက်လာပြီး ညောင်းတာကိုက်တာပေါ့သွားတယ် အပူလည်းတော်တော်ထွက်တယ် ဒီနည်းတိုင်း သုံးရက်လောက် လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ညောင်းတာကိုက်တာ အပူများတာ ကျန်တဲ့ရောဂါတစ်ချို့ သက်သာလာမှာသေချာတယ် ထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူများ စမ်းကြည့်ပါ အကျိုးမယုတ်ပါဘူး ။ ။
နောက်တစ်နည်း နေ့ စဉ် အ ချိန် မှန် ည အိပ်ယာဝင် ခါနီးတိုင်း… ဆားနင်းခြင်း…… ဆားနင်းရင် ကိုယ်တွင်းအောင်းပူတွေ ထွက်စေသည်။ နင်းပုံနင်းနည်းကတော့
မနင်းခင် ခြေထောက်ကို.. ပေါင်ရင်းကစပြီး ရေလောင်းဆေးပါ..ခြောက်အောင်သုတ်ပါ…။ (ဆား ၁ ပိဿသာ ၂ပိသာ ဆို ပိုကောင်း) ဆန့်တဲ့ ဇလုံကြီးထဲထည့်ပြီး နင်းပါ…။ နာရီဝက်လောက် ဆက်တိုက်နင်းရင်းနဲ့ ခြေထောက်က…ချွေးများ ထွက်လာတာ တွေ့ရပါမယ်…။
မိနစ် ၃၀ -၄၀ – ၁နာရီ ကိုယ်ကျေနပ်သည်ထိ နင်းပြီးတာနဲ့…မနင်းခင် အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ ပုဝါနဲ့ခြေထောက်ကို ဆားဇလုံထဲ ပွတ်ချပြီး ဆားတွေပြောင်အောင် သုတ်ပါ… ခြေထောက်ကို လုံးဝ(လုံးဝ) ရေပြန်မဆေးရပါ… ခြေထောက်ပြောင်တာနဲ့ အိပ်ယာဝင်ပါ… ပထမနေ့မှာပဲ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ပါမယ်…။
နဂိုဆံပင်သန်သူတွေ ပိုပြီး ဆံပင်တွေသန်လာမည်. ကျန်းမာခြင်းကိုအားပေးမည် …။ ရှယ်ပေးခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ယူပေးကြပါ။
ယနညေ့ လကျတှစေ့မျးကွညျ့တာ ဆား (၅၀ )သားလောကျ ရနှေေးနဲ့ခွထေောကျကို နာရီဝကျလောကျစိမျထားပွီး ခွဖေဝါးကို ဆားနဲ့ပှတျတာ ပွီးတော့ပွောငျအောငျသဘကျနှငျ့သုတျလိုကျတယျ ဒူးအောကျကနေ ရနှေေးလေးနဲ့ လောငျးပွီးဆေးလညျးရပါတယျ ကိုယျမှာခြှေးမြားထှကျလာပွီး ညောငျးတာကိုကျတာပေါ့သှားတယျ အပူလညျးတျောတျောထှကျတယျ ဒီနညျးတိုငျး သုံးရကျလောကျ လုပျကွညျ့မယျဆိုရငျ ညောငျးတာကိုကျတာ အပူမြားတာ ကနျြတဲ့ရောဂါတဈခြို့ သကျသာလာမှာသခြောတယျ ထို့ကွောငျ့ကနျြးမာရေးလိုကျစားသူမြား စမျးကွညျ့ပါ အကြိုးမယုတျပါဘူး ။ ။
နောကျတဈနညျး နေ့ စဉျ အ ခြိနျ မှနျ ည အိပျယာဝငျ ခါနီးတိုငျး… ဆားနငျးခွငျး…… ဆားနငျးရငျ ကိုယျတှငျးအောငျးပူတှေ ထှကျစသေညျ။ နငျးပုံနငျးနညျးကတော့
နဂိုဆံပငျသနျသူတှေ ပိုပွီး ဆံပငျတှသေနျလာမညျ. ကနျြးမာခွငျးကိုအားပေးမညျ …။ ရှယျပေးခွငျးဖွငျ့ကုသိုလျယူပေးကွပါ။